शनिको प्रभावले कुन-कुन राशिलाई लाग्दैछ साढेँ सातको दशा जन्नुहोस ! – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण २२, २०७७ समय: ११:२७:३३
शनि देव कर्मको हिसाबले फल प्रदान गर्ने गर्छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । नराम्रो काम गर्नेहरुसँग शनि देव रिसाउने र सजाय दिन्छन् भन्ने पनि विश्वास गरिन्छ ।
जब कुनै ग्रह वक्री हुन्छ तब त्यसको दृष्टिको प्रभाव अलग हुन्छ। आगामी वर्ष २०७८ को जेठ ९ गते शनि वक्री हुनेछ। शनिदेवको वक्री दृष्टि कुन राशिमा बढी पर्ह्ह र यसको नराम्रो प्रभावबाट कसरी बच्न सकिन्छ।
शनि ग्रहका दुई राशि छन्, कुम्भ र मकर। वक्री शनिको सबैभन्दा बढी असर यिनै दुई राशिमा हुन्छ। साढे सातीको कारणले यो प्रभाव अझ बढ्नेछ।
यस बाहेक शनि तुलामा उच्च र मेषमा तल हुन्छ। वक्री अवस्थामा तुला राशिका जातकले सकारात्मक परिणाम पाउँछन् भने मेष राशिका जातकले नकारात्मक परिणाम पाउँछन। शनि जब कुनै राशिको सप्तम भावमा हुन्छ त्यतिबेला अशुभ फल दिन्छ।
१. फलामलाई शनिको धातु मानिन्छ । शनिबार फलाम घरमा ल्याउँनुहुँदैन । यस दिन फलामबाट बनेका सामानहरु दान गर्नु शुभ मानिन्छ ।२. शनिबार मासको कालो दाल किन्न हुँदैन । शनिबार यो दालबाट बनेको खिचडी दान गर्दा शुभ हुने विश्वास गरिन्छ ।
३. शनिबार सरसोँको तेल घरमा ल्याउँनुहुँदैन । तर, यस दिन यो तेल दान गर्न सकिन्छ । शनि देवलाई प्रशन्न बनाउन तेल शनिदेवलाई अभिषेक गराउँन सकिन्छ ।४.शनिबार जुत्ता चप्पल किन्न हुँदैन । शनिबार जुत्ता चप्पल किन्दा शनिदेव रिसाउने र असफलता मिल्ने विश्वास गरिन्छ ।